Heino yeruzivo rweKali Linux dzakanakisisa dzichakubvumira kuti uongorore kuchengeteka kwe-web server uye kubatsira pakuita kuvhara nekuongorora.
Kana iwe uchiverenga Kali Linux review, unoziva kuti nei ichionekwa seimwe ye yakanakisisa Linux distributions for hacking uye pen-test uye zvakakodzera kudaro. Iyo inouya yakabikwa mune zvakawanda zvishandiso kuitira kuti zvive nyore kwauri kuti uedze, huck, uye kune chimwe chinhu chipi zvacho chine chokuita nehuwandu hwemashuponi.
Icho chimwe chezvinhu zvakakurudzirwa zve Linux distro nekuda kwehutsika huckers. Kunyange kana iwe usati uri nyangadzi asi webmaster - unogona kushandisa zvimwe zvemashanditi kuti uone nyore nyore web server yako kana peji yewebhu.
Mune zvimwe zviitiko, pasinei nokuti chinangwa chako ndechei - tichacherechedza zvimwe zvekushandisa zvakanakisisa zveKali Linux zvaunofanira kushandisa.
Cherechedza kuti haisi matanho ose ataurwa pano akazaruka.
Kune marudzi mazhinji emhando yezvishandiso zvinouya kusati yaiswa. Kana iwe usingawani chigadzirwa chakaiswa, chingozvitsvaga uye chigadzire. Zviri nyore.
Nmap kana kuti "Network Mapper" ndechimwe chezvinhu zvakakurumbira zvikuru paKali Linux kuti uwane ruzivo rwekuunganidza. Mune mamwe mazwi, kuwana zivo pamusoro pemubati wekamba, IP address yake, OS kuziva, uye yakafanana network network tsanangudzo (kufanana nenhamba yematokari akazaruka uye zvavari).
Inopawo zviitiko zvekudzivirira moto uye spoofing.
Lynis isiri chinhu chakasimba chekuchengetedzwa kwekuchengeteka, kuongororwa kwekutevedza, uye kuoma kwehutano. Zvechokwadi, iwe unogonawo kushandisa izvi kuti uwane rusununguko kuonekwa uye kuedza kupinda mukati.
Ichasveta hutano maererano nehutano hunoona. Semuenzaniso, kana ichiona Apache - iyo ichapedza miedzo yeApache-yechiratidzo chepini.
WordPress ndeimwe yei CMS yakasununguka yakachena uye izvi zvingava zvakanakisisa zvakasununguka WordpPress kuchengetedza nyanzvi yekuongorora. Iko kusununguka asi kwete kuzarura.
Kana iwe uchida kuziva kana WordPress blog inopera mune imwe nzira, WPScan ishamwari yako.
Mukuwedzera, inokupawo mashoko ema plugins anoshandiswa. Zvechokwadi, bhazha rakachengetedzwa rakanaka harifaniri kukupa zvakawanda, asi ichiri iro rakanakisisa cheShokoPress kuchengetedzwa kunotsvaga kuti uwane mikana yakaoma.
Aircrack-ng inounganidza zvigadzirwa zvekuongorora WiFi network security. Hazvirevi kungotarisa uye kuwana zivo - asi zvinosanganisirawo kukwanisa kuisa marangire (network, WEP, WPA 1, uye WPA 2).
Kana iwe ukakanganwa password yewe WiFi yako network - unogona kuedza kushandisa izvi kuti uwanezve kuwana. Inosanganisirawo zvakasiyana-siyana zvekusasvibira kusina kushandiswa kwaunogona kutarisa / kutarisa WiFi network kuti uwedzere kuchengeteka kwayo.
Kana iwe uri kutsvaga chimbo chinonakidza chekutengesa sepaipi / password pawiri, Hydra ichava chimwe chezvinhu zvakanakisisa zveKali Linux zvinouya zvinotanga kuiswa.
Ingave isingave yakasimbiswa zvakare - asi ikozvino yava GitHub, saka iwe unogona kuwedzera kushanda pairiwo.
Mazano ekuverenga 8 Privacy Oriented Alternative Search Engines kuGoogle mu 2019
Wireshark ndiyo inonyanyozivikanwa mumutambo analyzer inouya yakabikwa neKali Linux. Inogona kuenzaniswa seimwe yezvakanakisisa zveKali Linux zvishandiso zvekunamatira kunyoresa zvakare.
Iyo iri kushingaira kuchengetedzwa, saka ndaizonyatsokurudzira kuedza izvi.
Metsploit Framework ndiyo inoshandiswa zvikuru yekuongorora kupindira. Inopa shanduro mbiri - imwe (yakazaruka tsime) uye yechipiri ndiyo pro pro version kwayo. Nechidziro ichi, unogona kuvona kushaya simba, kuongororwa kunozivikanwa kushandiswa, uye kuita sarudzo yakakwana yekuchengetedzwa.
Zvechokwadi, shanduro yakasununguka haizove nezvose zvayo, saka kana iwe uri muzvinhu zvakakomba, unofanira kufananidza zvinyorwa pano.
Saizvozvowo neWPScan, asi kwete kungotarisa kune WordPress. Skipfish is web application scanner iyo inogona kukupa zvinyatsonzwisisiro kune anenge marudzi ese ewebhu web applications. Yakakurumidza uye iri nyore kushandisa. Mukuwedzera, nzira yaro inoramba ichikwira inoita kuti ive nani.
Nezvenyanzvi dzehutano hwekushandiswa kwehutano hwehutano, mushumo wakagadzirwa neCappfish uchauya zvakanaka.
Maltego iyo inonakidza yedhina mining tool yekuongorora mashoko ari paIndaneti uye kubatanidza mavara (kana pane). Sezvakaitwa nehuwandu hwemashoko, inoita girafura yakatungamirirwa kubatsira kubatsira kuongorora kubatana pakati pezvikamu zve data.
Iwe cherechedza, kuti iyi haisi iyo yakasununguka inoshandiswa.
Iyo inouya isati yaiswa, asi, iwe unofanira kuisaini kuti usarudze ipi yaunoda kushandisa. Kana iwe uchida kushandiswa pachedu, shanduro yemunharaunda ichakwana (iwe unongoda kubhadharira kwekodha) asi kana iwe uchida kushandisa nekuda kwebhizimisi, unoda kubhadhara ku classic kana XL version.
Kana uine kombiyuta yakabatana kune network, Nessus inogona kubatsira kuwana kushaya simba iyo munhu angangokurwisa angashandisa zvakanaka. Zvechokwadi, kana iwe uri mutungamiri wemakombiyuta akawanda akabatanidzwa kune network, unogona kushandisa nekudzivirira makombiyuta iwayo.
Zvisinei, iyi haisi yezvigadzirwa zvepachena zvakare, iwe unogona kuidzika pachena kwemazuva 7 kubva pairi pamutemo Website.
Burp Suite Scanner iyi inonakidza yewebhu web security analysis tool. Kusiyana nedzimwe web web application security scanner, Burp inopa GUI uye chaizvo zvishomanana zvishandiso.
Zvisinei, shanduro yemunharaunda inochengetedza zvinhu zvacho chete kune zvimwe zvishandiso zvebhuku rinokosha. Kune vashandi, iwe uchafanirwa kufunga nezvekuvandudza. Sakafanana nechigadzirwa chekare, iyi haisi yemvura yakasununguka kana.
Ndakashandisa shanduro yakasununguka, asi kana uchida mamwe mashoko pamusoro payo, unofanira kutarisa zvinhu zvinowanika pazviri pamutemo Website.
12. Nyama yemombe
BeEF (Browser Exploitation Framework) ichine chimwe chinhu chinofadza. Yakave yakagadzirirwa kuti vapinde mucherechedzo kuti vaongorore kuchengeteka kwewe web browser.
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakanakisisa zveKali Linux zvishandiso nekuti vazhinji vashandisi vanoda kuziva uye kugadzirisa zvinetso zvevabereki-pavanenge vachitaura pamusoro pekuchengeteka kwewebhu.
Apktool iri zvechokwadi chimwe chezvinhu zvakakurumbira zvinowanika paKali Linux zve reverse engineering Android apps. Zvechokwadi, iwe unofanirwa kushandisa zvakanaka iyo - nekuda kwezvinangwa zvekudzidzisa.
Zvaunogona kuverenga 4 Best Modern Open Source Mharidzo Vakuru VeKodhadhi muLinux
Nechirongwa ichi, unokwanisa kuedza zvimwe zvinhu iwe pachako uye rega wekugadzira nyanzvi azive nezvemaonero ako zvakare. Iwe unofunga kuti iwe uri kuishandisa chii?
Kana iwe wakanga uchitsvaga chizaruriro chekudzidzira kupinda mukati - sqlmap ndechimwe chezvakanakisisa. Iyo inoshandura nzira yekushandisa SQL injection kukanganisa uye inobatsira iwe kutora maseraji e database.
John the Ripper iyo inowanzozivikanwa pasi password cracker tool iripo paKali Linux. Iko kusununguka uye yakasununguka chinyorwa zvakare. Asi, kana iwe usingafariri ku community-enhanced version, iwe unogona kusarudza pro version yekutengeserana.
Unoda chaiyo-nguva yekuongorora magetsi uye kukwanisa kugadzira mapuraneti? Kunonoka ane musana wako. Kunyangwe iri iyo yakazaruka inonzi intrusion kudzivirira system, ine zvakawanda zvokupa.
The pamutemo Website inotaura nezvekuita kuti iite yakaiswa kana iwe usati watove nayo.
Autopsy inonzi digital forensic tool yekuongorora zvakaitika pane kombiyuta yako. Zvakanaka, iwe unogona kuishandisa zvakare kuti utore mifananidzo kubva SD card. Icho chiri kushandiswawo nemitemo yekuchengetedza mitemo. Iwe unogona kuverenga iyo mapepa kuti uongorore zvaunogona kuita nayo.
Iwe unofanirwawo kuongorora ivo GitHub peji.
18. Mambo Phisher
Kudzvinyirirwa kwePishing kunowanzojairika nhasi. Uye, Mambo Phisher tool inobatsira kuedza, uye kukurudzira kushandiswa kwevashandi nekuenzanisa chaiyo-nyika phishing kurwisa. Nezvikonzero zvakajeka, iwe unoda mvumo yekuenzanisa iyo pane seva yehutano yesangano.
Nikto iyo ine simba web server scanner - iyo inoita kuti ive yepamusoro yeKali Linux zvishandiso zviripo. Inotarisana nemafuta angangova nengozi / mapurogiramu, nguva dzisati dzaitika se server, nezvimwe zvinhu zvakawanda.
Yersinia iyo inofadza yekuita Shanduro 2 kurwisa (Layer 2 inoreva kudirana kwekutsvaga data OSI muenzaniso) pane network. Zvechokwadi, kana iwe uchida kuti muteteredzwa uve wakachengeteka, iwe uchafanirwa kuongorora zvose zvinomwe zvikamu. Zvisinei, chigadziri ichi chinonyanya kujeka paChitatu 2 uye zvakasiyana-siyana zvemitambo iyo inosanganisira STP, CDP, DTP, nezvimwewo.
Kana iwe uri munharaunda yakaisvonaka yekuongorora zvinhu, izvi zvinofanira kuva chimwe chezvinhu zvakanakisisa zvaunofanira kuongorora. Unyanzvi hwemagariro ndechimwe chinhu chikuru uye Isai chishandiso, iwe unogona kubatsira kudzivirira pakurwisa kwakadaro.
Pane chaizvo zvishandiso zvinowanikwa neKali Linux. Inoreva Kali Linux ' official tool listing page kuti vawane vose.
Iwe uchawana mamwe awo kuti ave akasununguka zvachose uye akasununguka kubva apo vamwe vangave vane zvigadziriswe (asi vakasununguka). Zvisinei, nokuda kwekutengeserana, iwe unofanirwa nguva dzose kusarudza edhidhiyo edhari.
Tingave takashaya chimwe chezvinhu zvako zvaunoda zveKali Linux. Isu? Ngationei pamusoro payo mune chikamu chemashoko pasi apa.
Kuisa Kali Linux pa VirtualBox: Yekukurumidza & Yakachengeteka Nzira
Kutanga kutsva kweKali Linux kuburitswa kwe2022 kunosanganisira kuvandudzwa kwekuona uye nezvimwe
[Nyowani] 151 Mahara & Akanakisa Mabloggi Maturu Ekuyedza mu2017 (Uye maitiro ekuishandisa)